UNjilo uhlale elindele ukusiza | News24
LAST UPDATED: 2017-12-15, 12:24
UNjilo uhlale elindele ukusiza
MHLELI: Akuve kubuhlungu ukuhanjelwa izingane zakho zonke kuze kungenele nakubazukulu bakho. Lapha ngikhuluma ngobuhlungu obuziwe udadewabo omncane kamama wami uSibongile odume ngelika Sbobobo endaweni yakwaDambuza kwaShwi, bude buduze nomuzi weqhawe uHarry Gwala.
Phela lapha ubefihla indodakazi yakhe yokugcina isisele uThembelihle emasontweni ambalwa adlule. Ngaphambi kokuba sivale unyaka odlule sasifihla umzukulu wakhe owadutshulwa iphoyisa lakuLoop Street emakethe kwase kuthuleka kanjalo ngoba sezwa kuthiwa wayezama ‘ukubamba inkunzi’ kodwa amaphoyisa asaphenya.
Kwahlula noma sesiya khona sozibuzela ngokuqhubekayo satshelwa ukuthi sizothintwa amaphoyisa aseThekwini aphenya ngezenzo zamaphoyisa. Kuze kube inamhlanje awakaze abuyele kuthina. Angikho-ke lapho kodwa lapho ngikhona izenzo zomakhelwane bakhe abazenza kuyona yomibili imingcwabo engihlaba umxhwele.
Kuyajabulisa ukuthi kusenomakhelwane abasadla ngoludala lapho kuthi ma kudlule khona umakhelwane banikele noma ingani abanganikela ngayo, ngisho nangesikhathi sabo uqobo.
Ungeke usho ukuthi indawo yakwaShwi isunguleke manje emva kwenkululeko kodwa ungafunga ukuthi kade bazana kuloya mphakathi. Izenzo zabo zimenze waduduzeka kakhulu umama wami omncane wazibona ukuthi akasele yedwa ngampela kuleya ndawo. Ngithe ngimvakashele washo wathi ‘mfana kasisi bengingazi mina ukuthi abantu bakule ndawo kanti bangithanda kangaka ngoba esikhathini esiningi ngihlala emsebenzini’.
Angijwayele nokuhamba imihlangano yalapha kodwa bangisule izinyembezi. Ngifisa le nto enhle abayenze kumndeni wakithi enhle kangaka baqhubeke nayo bayenze nakwabanye. Ngifuna ukubalula kakhulu umama uMrs Zandile Nzimande okunguyena obebahola phambili ekulekeleleni.Phambili mphakathi waseReggie Hadebe village! Ngizosale sengithatha leli thuba ngibonge bonke abantu baseMphithi kodwa ngiphume iqhubu nabantu baseNhlazatshe (ikakhulukazi uKen Zuma) naseSigingqini (ikakhulukazi uBongani Sibiya) ngokuba nathi ngezikhathi ezinzima esibhekane nazo sidlulelwa izingane zakhe uSbobobo.
Ngingakhohlwa umsizi wabantu abahluphekayo nongumnikazi weNduduzo Funeral uMnu Themba Njilo owasenzela imilingo esixhasa singazange simcele nokumcela futhi naye engasazisanga kodwa ebona isidingo salokho. Sithe sesihleli sesihlaziya umcimbi wonke sabuzana ukuthi kwavelaphi kodwa saze sathola kubasebenzi bakhe ukuthi sanikezelwa umhlonishwa. Isizulu sithi ‘ukwanda kwaliwa umthakathi’.
MFANAFUTHI JIKA PANTSI nzuza
Ngingakhohlwa umsizi wabantu abahluphekayo nongumnikazi weNduduzo Funeral uMnu Themba Njilo owasenzela imilingo esixhasa singazange simcele nokumcela futhi naye engasazisanga kodwa ebona isidingo salokho. Sithe sesihleli sesihlaziya umcimbi wonke sabuzana ukuthi kwavelaphi kodwa saze sathola kubasebenzi bakhe ukuthi sanikezelwa uye. Ukwanda kwaliwa umthakathi